မြန်မာဘက်ကလာတဲ့ မူးယစ်မှောင်ခိုသမားတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်။ (ဓာတ်ပုံ - ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ် - နိုဝင်ဘာ ၀၂၊ ၂၀၂၀)
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့ လက်နက်ကိုင်မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုသမားတွေနဲ့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာက မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းဝင် နှစ်ဦးကို အသေဖမ်းမိတဲ့သတင်းကို တင်ပြပါမယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ပေးထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်ခရိုင် မဲဖါလွမ်ဒေသမှာ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ လက်နက်ကိုင် မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းဝင်တွေကြား မနေ့တုန်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ရာက စိတ်ကြွဆေးပြား ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်နဲ့အတူ မူးယစ်ဂိုဏ်းဝင် နှစ် ဦးကို အသေဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ထိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသက ဒုဗိုလ်မှူးကြီး Pol. Narit Thawornwong က ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
"သိမ်းဆည်းမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ wy1 တံဆိပ်ပါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၀ တောင်ပိုင်းလက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေနယ်မြေကဖြစ်တယ်။" လို့ ထိုင်းဘာသာနဲ့ ပြောဆိုသွားတာပါ။
၀ဒေသက လာတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေအဖြစ် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကိုတော့ ရှမ်းပြည်လားရှိုးမြို့က UWSA ၀တပ်ဖွဲ့ ဆက်ဆံရေးရုံး တာဝန်ခံဦးညီရမ်းက ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
"ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးမှန်သမျှက WY လို့ပဲရေးထားတာပါ။ သက်သေမရှိဘဲနဲ့ ဒီလိုစွပ်စွဲလို့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်း အင်တိုက်အားတိုက်တားဆီးနေတာလည်း အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့ ၀တောင်ပိုင်းက ယိုးဒယားနယ်စပ်ထိတော့ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ နဲ့ ၅၀၀ လောက်ကွာဝေးတော့ ဒီလို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖမ်းဆီးဖို့ ထိန်းချုပ်ဖို့ကတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်လမ်းကြောင်း ဘယ်နေ့ဆိုတာ အတိအကျ သတင်းပေးရင်တော့ ဘယ်သူမဆိုကို ထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေး အရေးယူဖို့ကတော့ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ အဆင်သင့်ပါပဲ။"
ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး အမြောက်အမြား သယ်ဆောင်မယ့် သတင်းတွေ ကြိုတင်ရရှိထားတဲ့အတွက် နယ်စပ်ဒေသမှာ တပ်အင်အားတွေ တိုးချဲ့ပြီး စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တုန်းကလည်း လက်နက်ကိုင်မူးဂိုဏ်းတွေနဲ့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့် စစ်တပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြား ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်ပါ ထုတ်တွေကို စွန့်ပစ်ပြီး နောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ အင်အား၂၀ ခန့်ပါတဲ့ မြန်မာဘက်က၀င်လာတဲ့ မှူးယစ်ဂိုဏ်းဝင်တွေနဲ့ အမှတ် ၃၂ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ အကြား ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦး ကိုဗစ်ကူးစက်
မိနစ် ၂၀ ကျော်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မူးယစ်ဆေးသယ်ဆောင်လာတဲ့ လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦး အသေပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီး စိတ်ကြွဆေး ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကိုလည်း သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်တပ်က ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျကရစ်ကလည်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာဟာ မြန်မာ နယ်စပ်နဲ့ တစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ Mae Salong ကျေးရွာအနီးမှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်
ကပ်ရောဂါကာလမှာ အသွားအလာတွေ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုသူတွေကတော့ လမ်းကြောင်းသစ်တွေနဲ့ တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်း ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) က ပြောဆိုထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ့နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုမှုပမာဏဟာ ဒေါ်လာ ၇၁ ဘီလီယံထက်မနည်း ရှိခဲ့ပြီး ဒီအထဲမှာ Methamphetamine စိတ်ကြွဆေး မှောင်ခိုမှုက ၆၁ ဘီလီယံအထိ ရှိတယ်လို့လည်း UNODC က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ရွှေတြိဂံဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးတွေ အများအပြား ဖမ်းဆီးမိနေတာကိုကြည့်ရင် ကမ္ဘာတ၀န်း ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အာရုံစိုက်နေချိန် မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက အခွင့်ကောင်းယူနေတဲ့ လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်ကြောင်းလည်း UNODC က မကြာသေးခင်တုန်းကပဲ သတိပေးထားပါတယ်။
ဖမ်းမိမူးယစ်များ ၀ဒေသတောင်ပိ်ုင်းကလာဟု ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်စွပ်စွဲ
ဖမျးမိမူးယဈမြား ဝဒသေတောငျပိုငျးကလာဟု ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျစှပျစှဲ
ထိုငျးနိုငျငံ ခငျြးရိုငျခရိုငျမှာ မွနျမာနိုငျငံဘကျကလာတဲ့ လကျနကျကိုငျမူးယဈဆေးဝါး မှောငျခိုသမားတှနေဲ့ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျတှေ တိုကျပှဲဖွဈပှားရာက မူးယဈဆေးဝါးဂိုဏျးဝငျ နှဈဦးကို အသဖေမျးမိတဲ့သတငျးကို တငျပွပါမယျ။ ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးသတငျးထောကျ မအေးအေးမာက သတငျးပေးပို့ပေးထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျး ခငျြးရိုငျခရိုငျ မဲဖါလှမျဒသေမှာ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျနဲ့လကျနကျကိုငျ မူးယဈမှောငျခိုဂိုဏျးဝငျတှကွေား မနတေု့နျးက တိုကျပှဲဖွဈရာက စိတျကွှဆေးပွား ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကြျောနဲ့အတူ မူးယဈဂိုဏျးဝငျ နှဈ ဦးကို အသဖေမျးမိခဲ့ကွောငျး ထိုငျးမွောကျပိုငျးဒသေက ဒုဗိုလျမှူးကွီး Pol. Narit Thawornwong က ဒီကနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောဆိုလိုကျတာပါ။
"သိမျးဆညျးမိတဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှဟော wy1 တံဆိပျပါတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ၀ တောငျပိုငျးလကျနကျကိုငျ အငျအားစုတှနေယျမွကေဖွဈတယျ။" လို့ ထိုငျးဘာသာနဲ့ ပွောဆိုသှားတာပါ။
ဝဒသေက လာတဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှအေဖွဈ ထိုငျးအာဏာပိုငျတှရေဲ့ စှပျစှဲခကျြကိုတော့ ရှမျးပွညျလားရှိုးမွို့က UWSA ဝတပျဖှဲ့ ဆကျဆံရေးရုံး တာဝနျခံဦးညီရမျးက ဗှီအိုအကေို အခုလိုပွောပါတယျ။
"ဒီမူးယဈဆေးဝါးမှနျသမြှက WY လို့ပဲရေးထားတာပါ။ သကျသမေရှိဘဲနဲ့ ဒီလိုစှပျစှဲလို့ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ကနြျောတို့လညျး အငျတိုကျအားတိုကျတားဆီးနတောလညျး အားလုံးလညျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ကနြျောတို့ ဝတောငျပိုငျးက ယိုးဒယားနယျစပျထိတော့ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ နဲ့ ၅၀၀ လောကျကှာဝေးတော့ ဒီလို ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး ဖမျးဆီးဖို့ ထိနျးခြုပျဖို့ကတော့ မလှယျကူပါဘူး။ ဟုတျတယျဆိုရငျတော့ ဘယျသူဘယျဝါ ဘယျလမျးကွောငျး ဘယျနဆေို့တာ အတိအကြ သတငျးပေးရငျတော့ ဘယျသူမဆိုကို ထိရောကျတဲ့အပွဈပေး အရေးယူဖို့ကတော့ ကနြျောတို့ဘကျကတော့အဆငျသငျ့ပါပဲ။"
ထိုငျးအာဏာပိုငျတှကေတော့ မူးယဈဆေးဝါး အမွောကျအမွား သယျဆောငျမယျ့ သတငျးတှေ ကွိုတငျရရှိထားတဲ့အတှကျ နယျစပျဒသေမှာ တပျအငျအားတှေ တိုးခြဲ့ပွီး စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့တာဖွဈကွောငျးလညျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အောကျတိုဘာလ ၃၀ ရကျနတေု့နျးကလညျး လကျနကျကိုငျမူးဂိုဏျးတှနေဲ့ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့ စဈတပျနဲ့ ထိပျတိုကျတှခေဲ့ပမေဲ့ စိတျကွှဆေးပွား ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကြျောပါ ထုတျတှကေို စှနျ့ပဈပွီး နောကျပွနျလှညျ့ပွေးသှားခဲ့ပွီး နိုဝငျဘာလ ၁ ရကျနမှေ့ာတော့ အငျအား၂၀ ခနျ့ပါတဲ့ မွနျမာဘကျကဝငျလာတဲ့ မှူးယဈဂိုဏျးဝငျတှနေဲ့ အမှတျ ၃၂ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျတို့အကွား ရငျဆိုငျတိုကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။
မိနဈ ၂၀ ကြျောပဈခတျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ မူးယဈဆေးသယျဆောငျလာတဲ့ လကျနကျကိုငျနှဈဦး အသပေဈခတျနိုငျခဲ့ပွီး စိတျကွှဆေး ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကိုလညျး သိမျးဆညျးနိုငျခဲ့ကွောငျး တိုကျပှဲဖွဈပှားရာဒကေို ရဟတျယာဉျနဲ့ လာရောကျ စဈဆေးခဲ့တဲ့ ထိုငျးစဈတပျတပျက ဒုဗိုလျမှူးကွီး ကကြရဈကလညျး ထုတျဖျေါပွောဆိုသှားပါတယျ။
တိုကျပှဲဖွဈပှားတဲ့ နရောဟာ မွနျမာ နယျစပျနဲ့ တဈမိုငျခနျ့သာကှာဝေးတဲ့ Mae Salong ကြေးရှာအနီးမှာ ဖွဈခဲ့တာလို့ဆိုပါတယျ
ကပျရောဂါကာလမှာ အသှားအလာတှေ ကနျ့သတျထိနျးခြုပျထားပမေဲ့ မူးယဈဆေးဝါး မှောငျခိုသူတှကေတော့ လမျးကွောငျးသဈတှနေဲ့ တငျသှငျးနဆေဲဖွဈကွောငျးလညျး ကုလသမဂ်ဂ မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ ရာဇဝတျမှုဆိုငျရာရုံး (UNODC) က ပွောဆိုထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈထဲ မွနျမာနိုငျငံအပါအဝငျ အရှနေဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှ ဒသေမှာ မူးယဈဆေးဝါး မှောငျခိုမှုပမာဏဟာ ဒျေါလာ ၇၁ ဘီလီယံထကျမနညျး ရှိခဲ့ပွီး ဒီအထဲမှာ Methamphetamine စိတျကွှဆေး မှောငျခိုမှုက ၆၁ ဘီလီယံအထိ ရှိတယျလို့လညျး UNODC က ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ရှတွေိဂံဒသေမှာ မူးယဈဆေးတှေ အမြားအပွား ဖမျးဆီးမိနတောကိုကွညျ့ရငျ ကမ်ဘာတဝနျး ကပျရောဂါထိနျးခြုပျရေး အာရုံစိုကျနခြေိနျ မူးယဈဆေးမှောငျခိုဂိုဏျးတှကေ အခှငျ့ကောငျးယူနတေဲ့ လက်ခဏာတရပျ ဖွဈကွောငျးလညျး UNODC က မကွာသေးခငျတုနျးကပဲ သတိပေးထားပါတယျ။